နေပြည်တော် မတ်လ ၅ ရက် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ ပိုမိုတိုးတက်ဝင်ရောက်လာသော ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားဧည့်သည်များကို အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ သွားလာလည်ပတ်နိုင်ရေး သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် ကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှုများပေးနိုင်ရန်၊ ဒေသခံလူငယ်များ...
Tourists are visiting Myanmar with their own motor vehicles and motorbikes
Nay Pyi Taw, 5th March Tourists are continually visiting Myanmar to explore natural resources, tourist destinations, customs and traditions, lifestyles of different ethnic groups with cruises and their own motorbikes through International gateways and Border gates....
Nay Pyi Taw, 4th March Tourists are continually visiting Myanmar to explore natural resources, tourist destinations, customs and traditions, lifestyles of different ethnic groups with cruises and their own motorbikes through International gateways and Border gates. ...
နေပြည်တော်၊ မတ်လ ၁ ရက် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် စေရေး မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်လည်ပတ်သည့် နိုင်ငံတကာမှခရီးသွားဧည့်သည်များ လုံခြုံစိတ်ချ စွာဖြင့် အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်ရေးတို့ကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ...
နေပြည်တော်၊ မတ်လ ၁ ရက် နိုင်ငံခြားသား ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားဧည့်သည်များသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေမြေတောတောင် သဘာဝအလှများ၊ ခရီးသွားဆွဲဆောင်သည့်နေရာများ ၊ တိုင်းရင်းသားတို့၏ မတူကွဲပြားသည့် ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့စရိုက်များ၊ လူနေမှုဘ၀ပုံစံများကို ကြည့်ရှုလေ့လာ သိမြင်ခံစားနိုင်ရန်အတွက်...
ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားဧည့်သည်များ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှဝင်ရောက်၍ ပြည်တွင်းအပျော်စီးရေယာဉ်ဖြင့် လာရောက်လည်ပတ်လျက်ရှိ
နေပြည်တော်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားဧည့်သည်များသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တောတောင်ရေမြေ သဘာဝအလှအပများ၊ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ၏ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့စရိုက်များကို ကြည့်ရှုလေ့လာခံစားနိုင်ရန် လေကြောင်း၊ ရေကြောင်း များဖြင့် သာမက နယ်စပ်ဝင်/ထွက်ပေါက်များမှ...
နေပြည်တော်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် စေရေး မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်လည်ပတ်သည့် နိုင်ငံတကာမှခရီးသွားဧည့်သည်များ လုံခြုံစိတ်ချ စွာဖြင့် အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်ရေးတို့ကို...
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းမောင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်ကြီး မဟတ္တမဂန္ဒီ နှစ်(၁၅၀)ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ် နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ကားမောင်း ပြိုင်ပွဲ ပြီးဆုံးခြင်းအခမ်းအနားသို့တက်ရောက်
နေပြည်တော်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၄ ရက် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအုန်းမောင်သည် (၂၄-၂-၂၀၁၉) ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့၊ အင်းလျားလိတ်ဟိုတယ်တွင်ကျင်းပသည့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်ကြီး မဟတ္တမဂန္ဒီ နှစ်(၁၅၀)ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်...